टिचिङमा कोरोना संक्रमित डाक्टर नै संक्रमितको उपचार गर्दै :: Setopati
विवेक राई काठमाडौं, असोज २
कोरोना संक्रमित डाक्टर नै संक्रमितको उपचारमा खटिएको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तर काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालका आवासीय चिकित्सक सचित शर्मा आफू कोरोना संक्रमित भए पनि अन्य संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन्।
उनी नियमित उपचार सेवामा फर्किएको छ दिन भयो।
उनले कोरोना संक्रमण भएको दुई सातापछि आफू नियमित सेवामा फर्किएको जनाए। 'भदौ १६ गते मलाई संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसपछि २७ गते दोस्रो परीक्षण गर्दा पनि पोजेटिभ नै देखियो,' डा. शर्माले भने, '१० दिनपछि लक्षण नभएको स्थितिमा संक्रमण भए पनि अरूमा सर्दैन भन्ने छ। त्यसैले १५ दिनपछि नियमित काममा फर्किएको छु।'
सघन उपचारमा विशेषज्ञता हासिल गरिरहेका उनी अस्पतालको कोभिड आइसियूमा खटिएका छन्।
उनले पोजेटिभ भएर सेवामा फर्किन सुरूमा अप्ठ्यारो महशुस भए पनि संक्रमितहरूबाटै राम्रो प्रतिक्रिया पाएकाले सहज भएको सुनाए।
डा. शर्माले भने, 'मलाई संक्रमण भएको सबैलाई थाहा थियो। पछि सेवामा फर्किएपछि पनि संक्रमितहरूलाई म अझै पोजेटिभ छु तर लक्षण नभएकाले अरूमा सर्ने सम्भावना हुँदैन भनें। त्यसपछि उहाँहरूले पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिनुभयो। अहिले त सेवामा खटिन थप हौसला मिलेको छ।'
सुरूमा संक्रमण पुष्टि हुँदा भने आफूमा लक्षण भएको र १० दिनपछि लक्षण हराएर गएको उनले सुनाए।
लक्षण हुँदासम्म उनी घरमै 'होम आइसोलेसन' मा आराम गरिरहेका थिए। तर लक्षण हराएपछि भने उनलाई घरमै बसिरहन मन लागेन।
उनले पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा सघन उपचारमा खटिने विशेषज्ञहरूको अभाव रहेको सुन्दै आएका थिए। त्यसले गर्दा उनलाई सेवामा फर्किनुपर्छ भन्ने हुटहुटी भयो। उनी दुई साता होम आइसोलेसनको आरामपछि नियमित उपचारमा फर्किए।
उपचारमा फर्किएपछि सबभन्दा पहिले उनलाई आफ्नै सहकर्मीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइने भन्ने कौतुहलता थियो।
'सुरूमा आफैंलाई अप्ठ्यारो महशुस भएको थियो। तर सहकर्मी सबैले सकारात्मक लिनुभयो। त्यसमाथि हामी सुरूदेखि नै जुनबेला पनि संक्रमण हुनसक्छ भनेर त्यहीँ मानसिकताले सेवामा खटिएका थियौं,' उनले सम्झिए।
डा. शर्माले कोभिड आइसियूमा खटिने अर्का एक जना नर्स पनि संक्रमण भए पनि सेवामा फर्किएको सुनाए।
'हिजोबाट एक जना संक्रमित नर्स पनि काममा फर्किनु भएको छ। उहाँमा पनि लक्षण छैन,' उनले भने।
अहिले अस्पतालले पनि दुई सातापछि पोजेटिभ आए पनि लक्षण छैन भने काममा फर्किन सकिन्छ भनेर प्रोटोकल तयार पारिरहेको उनी बताउँछन्।
उनले अहिलेको परिस्थितिमा जोखिम नहुने भए स्वास्थ्यकर्मीले आराम लिनु नहुने जनाए।
अहिले अस्पतालले सघन उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई एक साता ड्युटी र एक साता होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी नियम बनाएको छ।
सोही अनुसार डा. शर्मा पनि सुरूदेखि नै खटिँदै आएका छन्। अहिले भने संक्रमण पोजेटिभ भए पनि उनी ड्युटी गर्दैछन्।
उनले केही दिनमा फेरि आफ्नो तेस्रोपटक परीक्षण गर्ने तयारी गरेको जनाए।
'अब फेरि दुईचार दिनमा अर्को एउटा परीक्षण गर्ने भनेको छु। अब चाहिँ नेगेटिभ आउँला कि,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २, २०७७, ०८:५६:००
डुबानमा विराटनगर, सुकुम्बासीको बिचल्ली (तस्बिरहरू)